Usarega Chero Chii Zvacho Chichiita Kuti Usakudzwa | Yokudzidza
Nharireyomurindi—Yekudzidza | February 2013
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mizo Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tatar Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Venda Vietnamese Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Usarega Chero Chii Zvacho Chichiita Kuti Usakudzwa
“Anozvininipisa achakudzwa.”—ZVIR. 29:23.
Tingawana rukudzo rwakaita sei kubva kuna Mwari?
Chii chingatitadzisa kupiwa rukudzo naMwari?
Kutsungirira kwedu kungaita sei kuti vamwe vakudzwe?
1, 2. (a) Shoko rokuti “kukudzwa,” kana muri muchiHebheru nechiGiriki rinorevei? (b) Tichakurukura mibvunzo ipi munyaya ino?
MUBHAIBHERI shoko rinoshandurwa dzimwe nguva kuti “kukudzwa,” muchiHebheru nechiGiriki rine pfungwa yechinhu chinobwinya. (Pis. 19:1) Pamwe pacho rine pfungwa yokurumbidzwa uye kuremekedzwa kungaitwa munhu nokuti anenge akapfuma chaizvo, aine uchenjeri, kana kuti akabudirira. Pakutanga shoko racho raiva nepfungwa yechinhu chine uremu. Kare mari payaigadzirwa nematombo anokosha akadai segoridhe nesirivha, ukoshi hwayo hwaibva pakuti yairema zvakadini. Mashoko aishandiswa kutsanangura uremu akazosvika pakushandisirwa zvinhu zvinokosha, zvinobwinya, kana kuti zvinoyemurika chaizvo.
2 Isu vanhu tinokudza vamwe pamusana pesimba, chinzvimbo, kana kuti mukurumbira wavo. Asi Mwari anotarisei pavanhu kuti avakudze? Izvozvo tinozviwana muMagwaro. Somuenzaniso, Zvirevo 22:4 inoti: “Mugumisiro wokuzvininipisa nokutya Jehovha ipfuma nokukudzwa noupenyu.” Uye mudzidzi Jakobho akanyora kuti: “Zvininipisei pamberi paJehovha, uye iye achakukwidziridzai.” (Jak. 4:10) Jehovha anokudza sei vanhu? Chii chingaita kuti tisapiwa rukudzo rwakadaro? Uye tingabatsira sei vamwe kuti vasvike pakupiwa rukudzo urwu?
3-5. Jehovha angaita kuti tikudzwe sei?
3 Munyori wepisarema akaratidza kuti aiva nechivimbo chokuti Jehovha aizomubata ruoko rworudyi omuendesa kukubwinya kwechokwadi kana kuti omukudza. (Verenga Pisarema 73:23, 24.) Jehovha anozviita sei? Anokudza vashumiri vake vanozvininipisa nenzira dzakawanda. Anovakomborera nokuita kuti vanzwisise kuda kwake. (1 VaK. 2:7) Anokudza vanhu vanomuteerera uye vanoteerera shoko rake nokuvabvumira kuva shamwari dzake dzepedyo.—Jak. 4:8.
4 Jehovha anopawo vashumiri vake basa rakakosha chaizvo roushumiri hwechiKristu. (2 VaK. 4:1, 7) Ushumiri uhwu hunoita kuti vakudzwe. Kune vaya vanoshandisa ropafadzo yavo kurumbidza Mwari uye kubatsira vamwe, Jehovha anovavimbisa kuti: “Ndichakudza vaya vanondikudza.” (1 Sam. 2:30) Jehovha anokudza vakadaro nokuita kuti vave nezita rakanaka naye uye vamwe vashumiri vaMwari vangangovarumbidza.—Zvir. 11:16; 22:1.
5 Zvakadini neramangwana revaya ‘vanotarisira kuna Jehovha uye vanochengeta nzira yake’? Vanovimbiswa kuti: “Iye [Jehovha] achakukwidziridza kuti ugare nhaka yenyika. Vakaipa pavanoparadzwa, iwe uchazviona.” (Pis. 37:34) Vanotarisira kupiwa rukudzo rwakakura chaizvo rwokuzowana upenyu husingaperi.—Pis. 37:29.
“HANDIGAMUCHIRI KUKUDZWA KUNOBVA KUVANHU”
6, 7. Nei vakawanda vasina kutenda muna Jesu?
6 Chii chingatitadzisa kupiwa rukudzo naJehovha? Chimwe chikonzero ndechokunyanya kukoshesa zvinofungwa nevanhu vasina ukama hwakanaka naMwari. Funga zvakanyorwa nomuapostora Johani nezvevamwe vaiva nemasimba mumazuva aJesu, paakati: “Vazhinji vevatongi vakatenda [muna Jesu], asi nokuda kwevaFarisi vakanga vasingamubvumi pachena, kuti varege kudzingwa musinagogi; nokuti vaida kukudzwa nevanhu kupfuura kukudzwa naMwari.” (Joh. 12:42, 43) Kudai vatongi ivavo vasina havo kunyanya kukoshesa zvaifungwa nevaFarisi.
7 Kwekutanga muushumiri hwake, Jesu ainge ambotaura pachena zvaizoita kuti vakawanda vasamugamuchire uye vasatenda maari. (Verenga Johani 5:39-44.) Kwemazana emakore, rudzi rwaIsraeri rwaitarisira kuuya kwaMesiya. Jesu paakatanga kudzidzisa, vamwe vanhu vangave vakanzwisisa kubva muuprofita hwaDhanieri kuti nguva yokuoneka kwaKristu yainge yasvika. Mwedzi yainge yadarika, Johani Mubhabhatidzi paaiparidza, vakawanda vaiti: “Kuti angava ndiye Kristu here?” (Ruka 3:15) Panguva iyi, Mesiya ainge akamirirwa kwenguva refu ainge ava pakati pavo achidzidzisa. Asi nyanzvi dzoMutemo hadzina kumugamuchira. Jesu akataura chikonzero chacho paakavabvunza kuti: “Mungagona sei kutenda, imi muchigamuchira kukudzwa kunobva kune mumwe nomumwe uye musiri kutsvaka kukudzwa kunobva kuna Mwari mumwe oga?”
8, 9. Uchishandisa muenzaniso wechiedza, tsanangura kuti rukudzo runobva kuvanhu rungavhariridza sei rukudzo runobva kuna Mwari.
8 Rukudzo runobva kuna Mwari runogona kuvhariridzwa norukudzo runobva kuvanhu. Tingafananidza kukudzwa nechiedza. Pazvinhu zvakasikwa naMwari, pane zvinopa chiedza chakakura chaizvo. Unoyeuka here pawakambotarira mudenga usiku kusina kana kakore ukaona zviuru nezviuru zvenyeredzi? Unofanira kuva wakashamiswa no“kubwinya” kwenyeredzi. (1 VaK. 15:40, 41) Asi kana ukatarira mudenga uri muguta, mumugwagwa une chiedza chemagetsi, hauoni nyeredzi dzacho. Chiedza chomuguta chinoita kuti titadze kuona chiedza chenyeredzi dziri kure! Imhosva here yokuti chiedza chemumigwagwa, nhandare dzemitambo, uye zvivako chine simba kana kuti runako rwakanyanya kupfuura chiedza chenyeredzi? Kwete! Imhaka yokuti chiedza chemuguta chiri pedyo nesu uye chinokanganisa maonero atinogona kuita nyeredzi. Kuti tione runako rwenyeredzi, tinofanira kuva panzvimbo isina chiedza chakaitwa nevanhu.
9 Saka kana mwoyo wedu uchinyanya kuda kukudzwa nevanhu, izvozvo zvingaita kuti tisakoshesa uye tisatsvaka kukudzwa kunogara kwenguva refu kunobva kuna Jehovha. Vakawanda havagamuchiri mashoko oUmambo nokuti vanotya zvingazofungwa neshamwari uye vomumhuri. Asi chido chokukudzwa nevanhu chingakanganisawo vashumiri vaMwari vakazvitsaurira here? Ngatitii jaya ranzi riparidze munzvimbo yarinozivikanwa chaizvo asi vanhu vasingarizivi seChapupu chaJehovha. Richatya rorega kuparidza here? Zvakadini kana mumwe akasekwa nokuti ari kuvavarira zvinangwa zvokunamata? Acharega vaya vasingakoshesi basa raMwari vachikanganisa zvaanosarudza muupenyu here? Ko kana muKristu akaita chivi chakakura? Achachivanza here achityira kuti angazotorerwa ropafadzo dzake muungano kana kuti nokuti haadi kuodza mwoyo hama neshamwari dzake? Kana achinyanya kufunga nezvekugadzirisa ukama hwake naJehovha, achashevedza “varume vakuru veungano” okumbira kuti vamubatsire.—Verenga Jakobho 5:14-16.
10. (a) Kunetseka nezvemaonerwo atinoitwa nevamwe kungatikanganisa sei? (b) Kana tikazvininipisa chii chichaitika kwatiri?
10 Ngatitii uri kushanda nesimba kuti uve muKristu ari nani asi imwe hama yokupa zano. Zano racho rinogona kukubatsira kana ukasariramba nemhaka yokudada, kunyara kana kuti kuedza kupa tuzvikonzero. Kana kuti ngatitii pane basa rauri kuita nemumwe waunonamata naye. Uchaita here basa racho uchinetseka kuti ndiani acharumbidzwa pamusana pemazano ako akanaka kana kuti kushanda nesimba? Kana ukava mune mamwe mamiriro ezvinhu ataurwa, iva nechokwadi chokuti munhu “anozvininipisa achakudzwa.”—Zvir. 29:23.
11. Tinofanira kuita sei kana tarumbidzwa uye nei tichifanira kudaro?
11 Vatariri uye vaya ‘vari kuda kuva vatariri’ vanofanirawo kungwarira kuti vasatsvaka kurumbidzwa nevanhu. (1 Tim. 3:1; 1 VaT. 2:6) Kana hama ikarumbidzwa pamusana pebasa rainenge yaita zvakanaka, inofanira kuita sei? Tine chokwadi chokuti ‘haizozvivakiri shongwe’ sezvakaitwa naMambo Sauro. (1 Sam. 15:12) Zvakanaka kuti hama yacho iyeuke kuti kubudirira kwayo imhaka yemutsa waJehovha usina kukodzera kuwanwa uye kuti inotoda kukomborerwa uye kubatsirwa naMwari kuti izobudirirazve mune ramangwana. (1 Pet. 4:11) Manzwiro atinoita mumwoyo anoratidza kuti tiri kutsvaka kukudzwa kwakaita sei.—Zvir. 27:21.
“MUNODA KUITA ZVINODIWA NABABA VENYU”
12. Chii chaitadzisa vamwe vaJudha kuteerera Jesu?
12 Zvido zvedu zvinogona kutitadzisa kukudzwa naMwari. Zvido zvakaipa zvinogona kutitadzisa zvachose kunzwa chokwadi. (Verenga Johani 8:43-47.) Jesu akaudza vamwe vaJudha kuti vaisateerera mashoko ake nokuti ‘vaida kuita zvaidiwa nababa vavo Dhiyabhorosi.’
13, 14. (a) Vatsvakurudzi vanoti pfungwa dzedu dzinoita sei padzinonzwa vanhu vachitaura? (b) Chii chinoita kuti tisarudze wokuteerera?
13 Dzimwe nguva zvatinonzwa nenzeve dzedu zvinobva pakuti tiri kudei. (2 Pet. 3:5) Jehovha akatisika nenzira inoshamisa zvokuti tinogona kusarudza zvokuisa pfungwa pazviri pane zvatinonzwa. Chimbomira zvishoma uteerere kuti unonzwa zvinhu zvakasiyana-siyana zvakawanda sei. Zvichida wanga usina kuisa pfungwa pazviri munguva pfupi yapfuura. Uropi hwako hwange huchikubatsira kuti uise pfungwa pachinhu chimwe chete asi uchikwanisa zvako kunzwa zvinhu zvakasiyana-siyana. Asi vanotsvakurudza vakaona kuti izvozvo zvakaoma kana yava nyaya yokuteerera vanhu vachitaura. Izvi zvinoreva kuti kana vanhu vaviri vachitaura panguva imwe chete, unofanira kusarudza kuti woisa pfungwa pane upi. Kuti uchasarudza upi zvinoenderana nokuti uri kuda kuteerera upi. VaJudha vaida kuita zvaidiwa nababa vavo Dhiyabhorosi havana kuteerera Jesu.
14 Tinowana mashoko kubva ‘kuimba youchenjeri’ uye ‘imba youpenzi.’ (Zvir. 9:1-5, 13-17) Zvinoita sokuti uchenjeri uye upenzi zviri kutishevedza, uye tinofanira kusarudza kuti tichaenda kupi. Tichabvuma kukokwa nechipi chacho? Mhinduro yacho iri pakuti tinoda kuita kuda kwaani. Makwai aJesu anoteerera inzwi rake uye anomutevera. (Joh. 10:16, 27) Iwo “ari kurutivi rwechokwadi.” (Joh. 18:37) “Haazivi inzwi revanhu vaasingazivi.” (Joh. 10:5) Vanhu vanozvininipisa zvakadaro vanokudzwa.—Zvir. 3:13, 16; 8:1, 18.
“IKO KUNOREVA KUKUDZWA KWENYU”
15. Matambudziko aPauro aiita sei kuti vamwe ‘vakudzwe?’
15 Kutsungirira kwedu pakuita kuda kwaJehovha kunoita kuti vamwe vakudzwe. Pauro akanyorera ungano yokuEfeso kuti: “Ndinokukumbirai kuti musaneta nokuda kwokukutambudzikirai kwandinoita, nokuti iko kunoreva kukudzwa kwenyu.” (VaEf. 3:13) Matambudziko aPauro aiita kuti vaEfeso ‘vakudzwe’ pakuti kudii? Chido chaPauro chokuramba achivashumira pasinei nemiedzo, chakaratidza vaEfeso kuti ropafadzo dzavaiva nadzo sevaKristu dzaikosha zvisingatauriki. Kudai Pauro akakanda mapfumo pasi paaitambura zvaisazoita here sokuti ukama hwavo naJehovha, ushumiri hwavo uye tariro yavo zvaisakosha? Kutsungirira kwaPauro kwakaita kuti chiKristu chisimudzirwe uye kwakaratidza kuti kuva mudzidzi kunokosha kupfuura chero chii zvacho.
16. Pauro akasangana nedambudziko ripi muRistra?
16 Funga kuti kushingaira uye kutsungirira kwaPauro kwakabatsira sei vamwe. Mabasa 14:19, 20 inoti: “VaJudha vakasvika vachibva kuAndiyoki neIkoniyumu vakanyengetedza mapoka evanhu, uye vakatema Pauro nematombo, vakamuzvuzvurudzira kunze kweguta [reRistra], vachifunga kuti akanga afa. Zvisinei, vadzidzi pavakamuunganira, iye akamuka, akapinda muguta. Pazuva rakatevera akabva naBhanabhasi vakaenda kuDhebhe.” Funga kuoma kwazvainge zvakaita kuti Pauro aite rwendo rwemakiromita 100 netsoka pashure pokutemwa nematombo zuro wacho akasiyiwa ati tasa!
17, 18. (a) Timoti anofanira kunge akanyatsotevera kutambura kwaPauro muRistra pakuti kudii? (b) Kutsungirira kwaPauro kwakabatsira sei Timoti?
17 Timoti aivawo mumwe ‘wevadzidzi’ vakabatsira Pauro here? Nhoroondo iri mubhuku raMabasa haitauri izvozvo asi anogona kunge aiva mumwe wavo. Funga zvakanyorwa naPauro mutsamba yake yechipiri kuna Timoti: “Wakanyatsotevera kudzidzisa kwangu, mararamiro angu, . . . zvinhu zvakaitika kwandiri muAndiyoki [kudzingwa muguta], muIkoniyumu [kupotsa atemwa nematombo], muRistra [kutemwa nematombo], kutambudzwa kwandakatsungirira; asi Ishe akandinunura mazviri zvose.”—2 Tim. 3:10, 11; Mab. 13:50; 14:5, 19.
18 Timoti “akanyatsotevera” zvakaitika izvozvo uye ainyatsoziva nezvokutsungirira kwaPauro. Timoti akaramba achizvifunga. Pauro paakashanyira Ristra, akaona kuti Timoti aiva muKristu ane muenzaniso wakanaka, “aipupurirwa zvakanaka kwazvo nehama dzomuRistra neIkoniyumu.” (Mab. 16:1, 2) Nokufamba kwenguva, Timoti akanga ava kukwanisa kuita mabasa akakura.—VaF. 2:19, 20; 1 Tim. 1:3.
19. Kutsungirira kwedu kunobatsira sei vamwe?
19 Kutsungirira patinenge tichiita kuda kwaMwari kunogonawo kubatsira vamwe, kunyanya vechiduku, vakawanda vacho vanozokura kuva vashumiri vaMwari vanobatsira chaizvo. Vechiduku vanoona uye vanodzidza paunyanzvi uye pamatauriro atinoita nevanhu muushumiri uyewo vanobatsirwa nokuona zvatinoita kana zvinhu zvaoma muupenyu. Pauro ‘akaramba achitsungirira zvinhu zvose’ kuitira kuti vose vanoramba vakatendeka ‘vawane ruponeso pamwe chete nokubwinya kusingaperi.’—2 Tim. 2:10.
Vechiduku vanodzidza kubva pakutsungirira kunoita vaKristu vakura
20. Nei tichifanira kuramba tichitsvaka kukudzwa kunobva kuna Mwari?
20 Saka hatifaniri here kuramba tichitsvaka “kukudzwa kunobva kuna Mwari mumwe oga”? (Joh. 5:44; 7:18) Ndizvo zvatinofanira kuita! (Verenga VaRoma 2:6, 7.) Jehovha anopa “upenyu husingaperi kune vaya vari kutsvaka” kukudzwa. Uyewo ‘kutsungirira kwatinoita mubasa rakanaka’ kunokurudzira vamwe kuti varambe vakatendeka vozowana upenyu husingaperi. Saka usarega chero chii zvacho chichikutadzisa kukudzwa naMwari.
Iyi Ndiyo Nhaka Yedu Inobva Kuna Mwari
Unokoshesa Nhaka Yedu Inobva Kuna Mwari Here?
Varindi vomuMuzinda waMambo Vanoparidzirwa
Aiva Wemhuri yekwaKayafasi
KUBVA MUDURA RENHOROONDO YEDU Mutambo “Waisakanganwika” Wakauya Panguva Yakakodzera
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA February 2013
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA February 2013